Atụmatụ N'ihi ejegharị Site Train With Kids Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Atụmatụ N'ihi ejegharị Site Train With Kids Na Europe
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 06/10/2020)
Udo na-atọ ụtọ. Okwu abụọ ị na-anụkarị ka ndị nne na nna na-ekwu mgbe ha na-agwa ha ezumike njem akụkọ na ụmụaka. Ya mere, anyị ekpebiela inye gị ndụmọdụ kachasị mkpa maka njem ụgbọ oloko na ụmụaka nọ na Europe.
E nwere nnọọ ihe banyere ụgbọ oloko na calms ụmụaka n'ụzọ na ikuku ma ọ bụ ụgbọ ala njem emela. (Anyị dere a dum blog on mere ụgbọ okporo ígwè eme njem bụ mma kacha mfe na Mma karịa Ịkwọ ụgbọala ma ọ bụrụ na ị mkpa karịa doro). Otu na-aga n'ihi na ndị okenye kwa! Family tebụl, agafe Okirikiri, ụlọ na-eje ije gburugburu, Cafe ụlọ ọrụ, oge nkata na ịchụkwudo na, ọṅụ nke ọṅụ, dịghị akpa mgbochi. Aga site okporo ígwè bụ nchebe, ọma na oké ọnụ mgbe zubere tupu. Kụziere ụmụ gị ọṅụ nke ụgbọ okporo ígwè njem si n'oge afọ na ha ga-ndụ atọghata. Ma ugbu a, ebe a na-Atụmatụ maka njem ụgbọ okporo ígwè na ụmụaka na Europe.
Atụmatụ maka njem ụgbọ okporo ígwè na ụmụaka na Europe: Weta Activities ogide Kids
Ezie na awat a ụgbọ okporo ígwè bụ fun n'onwe ya na anya n'èzí nwere ike na-na na ọbịa ọtụtụ awa, anyị na-atụ aro na-eweta ụfọdụ na-eme kwa. AKWỤKWỌ n'ọdịnihu ma nọrọ ná nchebe a window oche na a table na-enye gị na-agbasa agba? Akwụkwọ na snacks!
Ụfọdụ na-atụ aro ụgbọ okporo ígwè na-eme na-agụnye:
mbadamba: Yiri ihe ụgbọelu, a mbadamba nwere ike ịbụ oké ụzọ ruo oge. A ọtụtụ ụgbọ oloko na Europe na-enye free Wi-Fi, ma ndị ọrụ na-bụghị mgbe niile na-ekwe nkwa, wee jide n'aka na ị na- download movies na egwuregwu n'ụlọ. On ọtụtụ ụgbọ oloko, fọrọ nke nta ka ọ bụla otu oche nwere onye tinyekwa ka ị na-na ngwá electronic ebubo, ma ana ha n'ụlọ n'agbanyeghị – na-eme ka ekweisi!
akwụkwọ agba?: agba? akwụkwọ na crayons bụ a mmasị n'agbanyeghị ihe afọ.
Games: Ọ bụrụ na i nwere ike jidere oche a table, e nwere ọtụtụ ohere na-egwu kaadị ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ njem egwuregwu. N'adịghị ka ikuku njem, ị ga na-enwe nsogbu banyere ịgbā, ka bulie gị na ezinụlọ gị si mmasị egwuregwu na-aga play. Nke a nwere ike ịbụ zuru okè ohere n'ezie rụchaa a egwuregwu nke nanị!
Play ji egwuri egwu: Dabere na nwa gị dị afọ iri na mmasị, ka ụfọdụ Matchbox ụgbọala ma ọ bụ ndị ọzọ ụmụ obere ihe oyiyi (eche Polly-eri ego). My nwa-eme na table bụ a ịgba ọsọ mgbe nwa m nwaanyị na-esetịpụrụ elu ya obere nwa bebi na bụ'abụ ha na.
Atụmatụ maka njem ụgbọ okporo ígwè na ụmụaka na Europe: -Echebara ndị ọzọ njem
Ọgụgụ ka ukwuu nke ndị mmadụ ga-abụ nnọọ nghọta ma ọ bụrụ na i nwere a na-eti mkpu na nwa ma ọ bụ ihe na-ewe iwe toddler na-ewe oge iji ruo ala. Ọ bụghị atụmatụ n'ihu ma na-ekwe ka gị na onye nta delve n'ime ahuokika n'ihi enweghị atụmatụ wee ghara dị ka ọtụtụ ọmịiko. Plan ntụrụndụ na-adịghị intrusive ma ọ bụ yiri ka ebua arụmụka. Anyị na-adịghị achọ inwe dee Atụmatụ maka njem ụgbọ okporo ígwè na ụmụaka na Europe, na-abụghị nke gị…na-egwu egwu!
Atụmatụ maka njem ụgbọ okporo ígwè na ụmụaka na Europe: ejegharị ejegharị n'otu ntabi anya?
Always na-agbalị ka akwụkwọ a ogige na a sleeper ụgbọ okporo. Inweta n'otu ntabi anya ụgbọ oloko dị ebube, na-ehi ụra na-abụkarị ukwu n'ihi na eke Mkpatụ nke ụgbọ oloko. Ọ bụ na-akpali nnọọ mmasị na-aga ụra na aza elu ná mba ọzọ. Ihi ụra compartments ịdị iche iche site na mba ma ọ bụrụ na ị bụ nanị atọ na achọghị a ọbìa nkekọrịta na ị ahụ eleghị anya ị ga mkpa ego ịzụta ihe mmezi bed ka ị na-ehi ụra ogige onwe.
Atụmatụ maka njem ụgbọ okporo ígwè na ụmụaka na Europe: Ekwe onwe unu ọtụtụ oge mgbe na-apụ
Ọtụtụ ụgbọ oloko ga naanị kwụsị a di na nwunye nke nkeji kacha onye ọ bụla ọdụ, otú gburugburu nkeji ise tupu ị na-abata gị kwesịrị mbukota ihe elu, akpali akpali na-ehi ụra ụmụaka, etinye uwe na-ewetara akpa kwụsịrị efefe shelf. Nke a n'ogo nke nzukọ na-enye ọtụtụ nke udo nke uche karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere otutu nke ụmụaka ma ọ bụ na a ọtụtụ ibu. Ọ bụrụ na n'elu ikpo okwu bụ ọrụ n'aka, hụ na gị na akpa gaa mbụ n'ụzọ nke ọnụ ụzọ, mgbe ewetara ụmụaka ala mgbe e mesịrị, igbochi onye ọ bụla na-efu.
Atụmatụ maka njem ụgbọ okporo ígwè na ụmụaka na Europe: Weta Your stroller On Board
Ọzọ mere iji azụ kama ikuku njem bụ na i nwere ike kee gị na na nri n'ime stroller na tụgharịa ha nri na na ụgbọ okporo ígwè, without the headache of having to dismantle and then reassemble the stroller. You can sometimes even park your stroller in the snack area or other open places on the train (dị ka inweta ebe dị ka ogologo dị ka ọ na-adịghị ji site onye na a oche nkwagharị), nke na-enye aka na-eto eto ụmụaka bụ ndị ga na-ehi ụra na ha stroller. Nke a bụ nnukwu uru n'elu ụgbọelu njem dị ka m na-ahụ na-a nwa ewu na-ehi ụra na a ụgbọ okporo ígwè nnọọ mfe.
Atụmatụ maka njem ụgbọ okporo ígwè na ụmụaka na Europe: abata About 30 nkeji Early
Otu n'ime ndị isi na-erite uru nke njem ụgbọ okporo ígwè na ụmụaka na Europe ma ọ bụ n'ebe ọ bụla ọzọ n'ụwa n'ihi na okwu. Bụ nye onwe gị oge na-abata! N'adịghị ka ikuku njem, unu adịghị mkpa na-abata n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè tere n'ihu oge. Mgbe-ejegharị ejegharị na ụmụaka, anyị na-atụ aro bịarutere banyere 30 nkeji n'oge ina onwe gị nsogbu, ma eleghị anya, a obere tupu ma ọ bụrụ na ụlọ ịwụ-akwụsị na nri izu bụ na burukwa. A, bi usoro ga-amalite ruo mgbe 10 nkeji tupu ọpụpụ na ọtụtụ, ma ị na-achọghị ka scramble na-ahụ onwe gị na-agba ọsọ site na a ọrụ n'aka ojii.
O nwere ike ịbụ ihe kasị mkpa n'ọnụ niile. snacks! A otutu nke ogologo anya ụzọ gasị Njirimara full-ọrụ iri ụgbọala na ọtụtụ eyen-enyi na enyi nri – eche French tost, grilled cheese, meatballs na Penne. On mkpumkpu ụzọ gasị, ụgbọ oloko nwere nri Ogwe àjà sandwiches, bagels, ibe, na ndị ọzọ na snacks. Nwere ike ị chọrọ abịa ụfọdụ nke gị na na ọkacha mmasị snacks n'agbanyeghị ezie! Ejegharị ejegharị na nwa ọhụrụ? Weta nri nwa ma ọ bụ usoro na-arịọ nri-ọrụ mkpara na kpoo ya n'ihi na ị. Ị nwere ike ime ka obi abụọ maka ụgbọ ala erimeri esisịt ini ke ebi ebi. Dị ka mgbe niile mgbe ejegharị ejegharị na ụmụaka, i kwesịrị ịdị na-eme ka snacks na-aba n'anya na, bụrụ na ị nwere ike ghara inwe a ndoputa ma ọ bụ na nri mmanya kpebie mechie mgbe gị na na gwa ya na ha na-agụụ na-agụgbu.
Njikere Nwere Obi Ike a ụgbọ okporo ígwè eme njem na ụmụaka ugbu a na ị na-ebu anyị Atụmatụ maka njem ụgbọ okporo ígwè na ụmụaka? Great! AKWỤKWỌ gị tiketi na Save A Train, hassle-free!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-travelingy-train-kids-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#holidaytips #kidsonatrain #kidstrips #travelwithkids europetravel Ezinaụlọ longtrainjourneys